KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): သစ်ခိုးထုတ်သည့် မြန်မာအဖွဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင် ဖမ်းမိ
1-8-36, Tatsumi, Room 406 Koto-Ku. 135-0053, Tokyo.Japan Tel: 03-6478-0940 E.Mail : knljapan@yahoo.com , http://www.knljapan.co.cc
သစ်ခိုးထုတ်သည့် မြန်မာအဖွဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင် ဖမ်းမိ
23 Nov, 2012 1:45 AM
ထိုင်းအမျိုးသား ဥယျာဉ်ပိုင် သစ်များအား တရားမဝင် ခိုးထုတ် နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖွဲ့တစ်ခုအား ယမန်နေ့က စံခလဘူရီ ခရိုင် ပလိုင်းနွစ် ရွာတွင် ထိုင်းအာဏာပိုင် များမှ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကန်ချနပူရီ အခြေစိုက် တပ်မ (၉) မှ နယ်မြေ စိုးမိုးရေး စစ်ကြောင်း၊ စံခလဘူရီ အခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့် အထူးတပ် ၁၄၀၆၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် ၁၃၄၊ ထွမ်ဖာဖုန်မြို့နယ် အမျိုးသား ဥယျာဉ် လုံခြုံရေး ပူပေါင်း အဖွဲ့က ဖမ်းဆီး မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့တွေ သစ်ကို ခွဲစိတ် နေကြတုန်း ဖမ်းမိတာ၊ နေ့လည် ၁၀ နာရီ ၅၅ မိနစ် မှာပေါ့၊ ကျွှန်တော်တို့ နိုင်ငံပိုင် သစ်တောတွေ ပြုန်းတီး ရပါတယ်၊ အခု အချုပ်ခန်းထဲ ထည့်ပြီး အမှု ဖွင့်ထား ပါတယ်” ဟု စံခလဘူရီ ဒေသခံ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သစ် ဆွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆင်နှစ်ကောင်၊ စတန်းစက် တစ်လုံး၊ ခွဲစိတ်ပြီး သစ်ပြား (၂၂) ချပ်နှင့် မခွဲစိတ် ရသေးသည့် ပိတောက်သား (၁) တုံး၊ ထိုင်းနိုင်ငံက တားမြစ်ထားသည့် အခြား သစ်အမျိုးအစား (၆) တုံး တို့အား သက်သေခံ ပစ္စည်း များအဖြစ် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်ဟု ရဲမှုခင်း အစီရင် ခံစာအရ သိရသည်။
နိုင်မြင့်ရွှေ ဆိုသူက ထိုင်းအမျိုးသား ဥယျာဉ်ပိုင် သစ်များခိုးထုတ်ရန် ဆင်နှစ်ကောင်အပါအ၀င် သစ်ဆွဲခ တစ်တန်လျှင် ထိုင်းဘက် ၁,၅၀၀ နှင့် တစ်ရက်လျှင် လုပ်အားခဘတ် ၂၀၀ နှုန်းဖြင့် လွှတိုက်သမားနှစ်ဦးအား ငှားရမ်းခဲ့ပြီး ခိုးထုတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သည်။
ဆင်ဦးစီး နိုင်ကပအီး (၅၂) နှစ်နှင့် နိုင်ဖုကလိ (၅၂) နှစ်တို့သည် ထိုင်းနယ်မြေ အသိအမှတ်ပြု ကဒ်ပြားများ ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ပြီး လွှတိုက်သမား နိုင်တာတာ (၄၅) နှစ်နှင့် နိုင်တာနု (၄၀) နှစ်တို့သည် ဘုရားသုံးဆူ ဒေသခံ မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်၍ တရားဝင်နေထိုင် သူများ မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ကာလ တန်ဖိုးအားဖြင့် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃၂,၀၀၀ ဘတ် တန်ဖိုးရှိ ပိတောက်နှင့် အခြား တားမြစ် သစ်တစ်မျိုး အား ခုတ်ယူ၍ ကြိတ်ခွဲ နေစဉ် ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆင်နှစ်ကောင် အပါအ၀င် သက်သေခံ ပစ္စည်း များအား ထိုင်းအမျိုးသား ဥယျာဉ်မှ သိမ်းယူထားပြီး ဖမ်းဆီး ရမိသည့် သူများအား ထိုင်းနိုင်ငံ သစ်တော ဥပဒေ အရ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 7:57 AM
ကရင့်နေ့ ထူးနေ့ မြတ်များ
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ -့---ပြာသိုလဆန်း ၁ရက်နေ့ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ ---- ဇန်န၀ါရီလ 31ရက်နေ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့---- ဖေဖော်ဝါရီလ 5ရက်နေ့ကရင်အမျိုးသားနေ့---- ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေ-့ --- ဧပြီလ 5ရက်နေ့ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနေ့ ----မေလ 23ရက်နေ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နေ -့---ဂျူလိုင် 5ရက်နေ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နေ့ ---- ဂျူလိုင် 16ရက်နေ့ကရင့်အာဇာနည်နေ-့ ---သြဂုတ်လ 12ရက်နေ့ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ့ (လက်ချည်ပွဲ)နေ့ ---- ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့ 
ကရင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီး စောဘဦးကြီး၏သစ္စာလေးရပ် For us surrender is out of question.(လက်နက်ချအညံ့ခံခြင်း အလျှင်းမပြောရ) We shall retain our arm.(ကရင့်လက်နက် ကရင်တွေကိုင်ထားရမယ်) The recognition of Karen State must be complete)(ကရင်ပြည် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံရမည်)We shall decide our own political destiny.(ကရင့်ကျမ္မာ ကရင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရမည်)။ /--------------------------------------------------------
ပဒိုမန်းရှာလုပ်ကြံခံရသည့်နေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၁၄ရက်၊(ချစ်သူများနေ့)တုန်လှုပ်ခဲ့ရသောနေ့ 
(၅၈)နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ( KNL _ JAPAN )
၂၀၀၈ ခုနှစ် KNL ( JAPAN ) သည် ၅၈နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တပ်မဟာ ( ၇) တွင်တက်ရောက်စဉ်
ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် )
knljapan@gmail.com, Tokyo, Japan
လာရောက် လည်ပတ်သော မိတ်ဆွေများ
1 . KAREN NATIONAL LEAGUE ( JAPAN ) KNL(JAPAN)............2. KAREN INFORMATION SPACE(JAPAN)KIS (JAPAN )...........3. KAREN NATIONAL UNION (JAPAN) KNU(JAPAN)............4. OVERSEA KAERN ORGANIZATION ( JAPAN ) OKO (JAPAN ).............................5. KAERN HUMAN RIHGTS COMMITTEE (JAPAN ) KHRC ( JAPAN )
karen Blog list
ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ်(ဂျပန်) ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ ၁၈ စည်းကမ်းသတင်း
ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ်(ဂျပန်) မှ အဖွဲ့ ဝင်များ မိမိပျက်ကွက်မှုကို မိမိတာဝန် ဖြစ်သည့် စည်းကမ်းကို ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ ၁၈ တွင် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ KNL(Japan)တွင် အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ပြီး ၃လ နှင့် အထက် အဖွဲ့ ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မပါဝင် နိူင်သော အဖွဲ့ ဝင် များ အဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ကရင်အမျိုးသားအရေး ဆောင်ရွက်ရန် ထည့်ဝင်ရမည့် အခန်းဌားခ နှင့် အလှူငွေ များ မထည့်ဝင် နိူင်သော အဖွဲ့ ဝင်များ အလိုအလျောက် ထုတ် ပယ် ခံရပြီးဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ်(ဂျပန်)
ကရင်စာလုံးများနှင့် ဇော်ဂျီဖေါင့် စာလုံး ရယူရန်။ (to get karen & burmese fonts)
ခွဲကဘောင်စာလုံးနှင့် Keyboard Karen Font & KB
ဇော်ဂျီယူနီကုတ် (Zawgyi Unicode for Window Vista Users)
ဇော်ဂျီဖေါင့် (Zawgyi Font for Blog)
ဇော်ဂျီယူနီကုန်ဖြုတ်ရန် (Zawgyi Remover)
Karen Traditional Buffalo Dance
karen traditional food
Karen Traditional Fashion Show
karen traditional wrist tying ceremony
New Bern Karen Traditional Lah Kwe Khee Su 1
Karen Tranditional Love Song
Life is like dove
General Saw Bo Mya discussed General Khin Nyunt for peace
Village Agency* Karen State *
အာဇာနည်တို့ ၏ သံဓိဌာန်
Funeral of General Saw Bo Mya
Death of Karen leader blow to Myanmar groups - 15 Feb 08 The Karen National Union, which is one of Myanmar's biggest rebel groups, has namedanew leader following the murder of its chief. KNU general secretary, Mahn Sha, was shot dead at his home in the Thai border town of Mae Sot on Thursday. And, as Hannah Belcher reports, the secretary general's death is seen asablow to the many tribal groups who are opposed to Myanmar's military government.
Myanmar's Karen mourn KNU leader's death - 23 Feb 08
Japan English Sign Up QuickList (0) Help Sign In CloseSet Your Country Content Preference (What is this?)Choose which country's videos, channels, and activity filters (for example, "Most Viewed"), you would like to view.CloseSet Your Language Preference (What is this?)Choose the language in which you want to view YouTube. This will only change the interface, not any text entered by other users. Upload Video File Quick Capture Search Home Videos Channels Community life of karen people
karen people and their new life
karen in thailand kau taw kae
MON at Japan
▼ 11/18 - 11/25 (21)
ဘဏ်ကို အနုကြမ်းစီးပြီး လူ၅ဦးအား ဓားစာခံထားပြီး ဝန်...
KNU အား ငြိမ်းချမ်းရေး သတိရှိရန် ပြည်တွင်း ကရင်လူမ...
နော်စီဖိုးရာစိန်ထံ ပေးပို့သည့် စောအယ်ကလူထူး၏ ပေးစာ...
Karen Women's Organization on Peace Talks Type t...
သစ်ခိုးထုတ်သည့် မြန်မာအဖွဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင် ဖမ်းမိ...
သတင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ကို မြန်မာဘက်က ပိတ်
ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇကို ထိခိုက်စေနိုင...
မူတူးဆေးဖိုး KNU စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူ...
၃ ပတ်ကြာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU ထိပ်သီးအစည်းအဝေး မှ မှတ်...
HQ OFF RFA Karen Language TV Program, November 3rd...
Diverse views on Obama's Burma visit
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်း Published on Nov...
အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ်
မြန်မာ-အမေရိကန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်သွားမ...
သမ္မတအိုဘားမား နှင့် အမေရိကန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အားလုံ...
ミャンマー医師 医療水準の向上訴え 11月17日 21時31分
► 2011 (2359)
► 08/07 - 08/14 (97)
► 03/27 - 04/03 (80)
hello knl japan
KNL Japan မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါဧ။်....